နယ်စည်းမခြား မြန်မာ ဘလော့ဂါများ: Blogger @ Chaung Thar
ဒီခေတ်ကြီးမှာ ခရီးတစ်ခုထွက်တယ် ဆိုတာ မလွယ်ဘူး။ အကြောင်း ၃ ပါးညီညွတ်မှထွက်ဖြစ်တာ။ အဓိက ကတော့ စရိတ်ပေါ့။ စရိတ်မတတ်နိုင်လို့က ဘယ်မှသွားဖို့မစဉ်းစားနဲ့။ ထလိုက်တာနဲ့ ငွေကုန်တဲ့ ဒီခေတ်ကြီးမှာ ဘယ်လိုမှအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူး။း( ပိုက်ဆံအဆင်ပြေတော့လည်း အချိန်က စကားပြောပြန်ရော။ အချိန်ရမှ သွားနိုင်တာ။ အချိန်မရှိ၊ ငွေသာရှိပြီး မသွားလိုက်ရ၊ မလုပ်လိုက်ရတာတွေလည်း တစ်ပုံကြီး။ နောက်တစ်ခု ကခရီးသွားဖော်ပေါ့ဗျာ။ အဖော်ကောင်းရင် နတ်ပြည်အထိလိုက်ဝံ့တယ် ဆိုတာ ကြားဖူးကြတယ်မှတ်လား။ အဖော်မကောင်းရင်တော့ ခရီးသာထွက်ရတာ... ပျော်မှာမဟုတ်ဘူး။
အခုတော့ ဘာညာတစ်ယောက် အကြောင်းသုံးပါးနဲ့ ညီညွတ်လို့ ခရီးထွက်ဖြစ်သွားပါတယ်။ စရိတ်ကတော့ စပွန်ဆာပါ (FOC FOC !!)။ ဆန်းဒေးက မင်္ဂလာဆောင်သွားတဲ့ ညီမ စုံတွဲ ကဟန်းနီးမွန်းကို ၂ ယောက်တည်းသွားရတာ ပျင်းလို့ဆိုပြီး ကျနော်တို့ မောင်နှမတစ်ဖွဲ့လုံးကို စရိတ်ခံပြီးတော့ခေါ်သွားတာ။ နောက်အချိန်က လည်းအဆင်ပြေသလားမမေးနဲ့ ရုံးက ကျနော်မရှိအေးရောဆိုပြီး ခွင့်တစ်ပတ်ကို တန်းပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်။ :P အဖော်တွေကလည်း စိတ်တူမောင်နှမတွေချည်းဆိုတော့ တစ်ခုခုလုပ်မယ်ဆို ၂ ခါမတိုင်ပင်ရဘူး။အိုကေစိုပြေနေတာပဲ ။ ဒါနဲ့ပဲ တနင်္လာနေ့က မင်္ဂလာဆောင်လည်း ပြီးရော အထုတ်ပြင်ပြီး ချောင်းသာ ကိုသွားဖြစ်ကြပါတယ်။ အဖွဲ့လိုက်ထွက်ဖြစ်တဲ့ ဟန်းနီးမွန်းခရီး ကြီးစတင်ပါပြီ.........
ပင်လယ်ရေကျချိ်န်မို့လို့ ဒီကျောက်ဆောင်တွေက ပေါ်တာ။
ရွာထဲက ခရုဆိုင်လေးတွေ။ ကျိုက်ထီးရိုးတို့နဲ့မတူတာ သူတို့က လာဝယ်တဲ့လူကို ဒါယူပါ ဟိုဟာယူပါ တွေဘာတွေမပြောဘူး။ ကိုင်ကြည့်ရင်လည်း ဈေးမပြောတတ်ဘူး။ ဒီအတိုင်းပဲ ငုတ်တုတ်ကြီးတွေ ထိုင်နေတတ်ကြတယ်။ တစ်မျိုးပဲ..
အုန်းလက်ဦးထုတ်ရောင်းတဲ့ကလေးလေး။ ဦးထုတ်တစ်လုံး ၂၀၀ အော်ပြီးတော့ တစ်နေ့လုံးသောင်ပြင်မှာတွေ့နေရတယ်။ ကျောင်းကောတတ်လားလို့ မေးကြည့်တာ ။ `မတတ်ဘူး´ တဲ့။ သူငယ်တန်းအရွယ်လောက်တော့ရှိပြီထင်တယ်..
ဘောကွင်းတွေငှားတဲ့ဆိုင်၊ ဘောကွင်းက ၅၀၀၊ လှေက ၃၀၀၀။ နာရီနဲ့မဟုတ်ဘူး။ တစ်နေ့လုံးကြိုက်သလောက်စီး။
*ဂဏန်းမဆလာချက်*။ ချောင်းသာမှ ဂဏန်းဟင်းက ပုံမှန် 3000 လောက်တော့ရှိတယ်။ ရန်ကုန်မှာ ၁၀၀၀၀ ပေးစားရထက်စာရင် အပုံကြီးတန်တယ်။
~ပင်လယ်လို ဆူညံ..ကိုယ်ခေါ်နေပါတယ်.. ဒါပေမဲ့လည်း.. သူမကြားဘူးကွယ်...~
ပုဇွန်ကြားကင်။ တစ်ချောင်း ၁၀၀။ ဈေးဆစ်နိုင်ရင်တော့ အကောင် ၃၀ ကို ၂၀၀၀ လောက်နဲ့ ရနိုင်တယ်။
ထမင်းကြော် & Sunny Sunshine!!
မနက်စာအတွက် ဟော်တယ်ကနေ့တိုင်းဒါကျွေးတတ်တယ်။ ကောက်ညှင်းပေါင်းနဲ့ ငါးရံ့ခြောက် (အစစ်)။း)
Posted by BarNyar at 10:26 PM